All daboolayaa meel ka mid ah 30,000 oo mitir oo laba jibbaaran, oo ay ku jiraan workshop-soo-saarka, xarunta imtixaanka iyo xarun lagu kaydiyo. set Full qalabka qalabaynta sare leh in ka badan 120 shaqaalaha hawlgalka iyo 5 kormeerayaasha tayada xirfadeed ayaa mas'uul ka ah tayada wax soo saarka. Baako gelinta isweydaarsiga kidhliyadiisa meel ka mid ah 2,000 oo mitir oo laba jibbaaran, 20 shaqaalaha raaci doonaa code xirxirida ah.
Waxaa jira 20 shaqaale maaraynta xarunta 4,000 logistics mitir oo laba jibbaaran, kaas oo ku qalabeysan yahay nidaamka maamulka bakhaar iswada iyo qalabka hawo iyo gacan ku haynta heerkulka sare, iyo awoodda ay leeyihiin goosashada matoorada
xafiiska naqshadaynta iyo qol bandhig ku daboolaa aag of 500 mitir oo laba jibbaaran, 10 horumarinta iyo samaynta gaadhsiiya ka badan boqolaal naqshado cusub sannad kasta. Sanad kasta, ay yihiin la qorsheeyo buugga soo saarka cusub ee VIP custmers.We ugu faraxsan in ay aqbalaan aad si ODM ama OEM.